MSF oo wax ka badaleysa gargaarka caafimaad ee ay ka bixisa Galgaduud xaaladda amaanka oo sii xumaneysa awadeed - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Nairobi, 16ka May 2012. Xaaladda amaanka oo sii xumaaneysa awadeed, MSF waxaa ay sameysay go’aan adag oo ah in ay xirto mashruucyada degmooyinka Dhuusamareeb iyo Xiindheere kuwaas oo la furay sanadihii 2006 iyo 2008. Waxaa sidoo kale intaas dheer in wax laga badali doono taageerada MSF ay siiso isbitaalka Istarliin ee degmada Guricel.
“Xaaladda amaanka ee degmooyinkan oo sii xumaaneysa ayaan u fasixi Karin MSF in ay howlgalkeedi usii wado sidi caadiga ahayd ee ay kormeeridda ku sameyn jireen shaqaalaha caalamiga ah oo caawinaya kuwa maxaliga ah.” Ayuu yiri Bertrand Parrochet, madaxa hay’adda MSF e mashruucyada Soomaaliya.
“Laakiin waxaan rajeyneynaa in shaqaalaheena sida fiican u tawabaran ay dadka deeganka u sii wadi karaan bixinta adeeg asaasi ah ee caafimaad oo heer sara ah.”
Sanadihii la soo dhaafay, MSF waxa ay si weyn u maalgelisay tawabarka ay siiso shaqaalaha isbitaalka Istarliin iyo bixinta adeegga caafimaad ee casriga ah ee meel fog laga hago iyadoo la adeegsanaayo qalabka lagu wada xiriira. Iyadoo la isticmaalayo qaabka cusub ee ismaamulka ah, shaqaalaha caalamiga ah waxey la talin caafimaad ay bixin doonaan iyagoo goob fog ku sugan waxeyna sidoo kale caawin doonaan shaqaalaha maxaliga ee ka howlgala isbitaalka Istarlin.
MSF waxaa ay si joogta ah uga shaqeyneysay dalka Soomaaliya tan iyo sanadkii 1991di. MSF waxaa ay ku tiirsantahay deeqaha shakhsiyaadka ay bixiyaan si ay u maal gelisa howlaheeda Soomaaliya, iyadoo an wax deeq ah ka qaadanin dowladaha.
Qoraalada kale ee ku saabsan Galgaduud, South Central Somalia